RFA Burmese, 2025 M St NW, Washington D.C., DC (2021)
Ph: (+1) 202-530-4900
Email: [email protected] Radio Free Asia (RFA) isaprivate, nonprofit corporation that broadcasts news and information to listeners in Asian countries where full, accurate, and timely news reports are unavailable.
■ အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ စတငျကငျြးပမယျ့ အာဆီယံ ထိပျသီး အစညျးအဝေးကို မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျတှေ တကျရောကျခှငျ့ မပွုဖို့ အာဆီယံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးမြား အစညျးအဝေးက ဒီနေ့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျလို့ NHK သတငျးဌာနက ကွားဖွတျသတငျးအဖွဈ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျကို ထိပျသီး အစညျးအဝေး တကျခှငျ့ပွု၊ မပွု ဆိုတဲ့ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ကနျြတဲ့ အာဆီယံကိုးနိုငျငံက နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး‌တှေ အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျ ဒီနေ့ အှနျလိုငျးဗီဒီယို ကတဈဆငျ့ အစညျးအဝေး ပွုလုပျခဲ့ကွတာပါ။
နှဈနာရီကြျောကွာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဒီအစညျးအဝေး ဆုံးဖွတျခကျြကို မနကျဖွနျစနနေမှေ့ာ လကျရှိ အာဆီယံအလှညျ့ဥက်ကဋ်ဌဖွဈတဲ့ ဘရူနိုငျးနိုငျငံက တရားဝငျ ထုတျပွနျကွညောမယျလို့ မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဌာန ပွောခှငျ့ရသူနဲ့ ဒသေတှငျး သံတမနျတဈဦးကို ကိုးကားပွီး ရိုကျတာသတငျးဌာနက ဖျောပွပါတယျ။ အစညျးအဝေးမှာ ဘာတှဆှေေးနှေးခဲ့ကွသလဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိတျကိုတော့ ထုတျဖျောပွောဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ရှသေီ့တငျးပတျအတှငျး အာဆီယံအထူးသံတမနျ Erywan Yusof မွနျမာနိုငျငံ သှားရောကျနိုငျရေးအတှကျ အစညျးအဝေးမှာ ဆှေးနှေးကွမှာလို့ မလေးရှား နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Saifuddin Abdullah က ရိုကျတာသတငျးဌာနကို ဒီနမေ့နကျပိုငျးက ပွောပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီကိစ်စ တိုးတကျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျကို ထိပျသီးအစညျးအဝေး တကျခှငျ့မပွုဖို့ မလေးရှားရဲ့ သဘောထား ပွောငျးလဲမှာ မဟုတျဘူးလို့လညျး ပွောဆိုထားပါတယျ။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Retno Marsudi ကလညျး… မွနျမာနိုငျငံ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါ ပွနျမရောကျမခငျြး အာဆီယံ ထိပျသီး အစညျးအ‌ဝေးတှမှော မွနျမာကို အစိုးရအဆငျ့ ကိုယျစားပွု တကျခှငျ့မပေးဖို့ အကွံပွုခဲ့တယျလို့ သူ့ရဲ့ တှဈတာလူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားပါတယျ။
မွနျမာ့အရေး အာဆီယံ ဘုံသဘောတူညီခကျြ ငါးခကျြနဲ့ ပတျသကျလို့ တိုးတကျမှု တဈစုံတဈရာ မတှရေ့ကွောငျး ဒီနေ့ အရေးပျေါအစညျးအဝေးမှာ ထောကျပွဆှေး‌နှေးခဲ့တယျလို့လညျး ‌ရေးသားထားပါတယျ။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကို ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ခွင့်မပြုဖို့ အာဆီယံဆုံးဖြတ်
■ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခွင့် မပြုဖို့ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးက ဒီနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ NHK သတင်းဌာနက ကြားဖြတ်သတင်းအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ထိပ်သီး အစည်းအဝေး တက်ခွင့်ပြု၊ မပြု ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်တဲ့ အာဆီယံကိုးနိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး‌တွေ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် ဒီနေ့ အွန်လိုင်းဗီဒီယို ကတစ်ဆင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
နှစ်နာရီကျော်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မနက်ဖြန်စနေနေ့မှာ လက်ရှိ အာဆီယံအလှည့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူနဲ့ ဒေသတွင်းသံတမန်တစ်ဦးကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ရှေ့သီတင်းပတ်အတွင်း အာဆီယံအထူးသံတမန် Erywan Yusof မြန်မာနိုင်ငံ သွားရောက်နိုင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးကြမှာလို့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Saifuddin Abdullah က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ပြောပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီကိစ္စ တိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကို ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ခွင့်မပြုဖို့ မလေးရှားရဲ့ သဘောထား ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
အစည်းအဝေးနဲ့နီးစပ်တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်ငါးခုရဲ့ အဆိုအရ အာဆီယံ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေး ကို နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က မဟုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားမယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Retno Marsudi ကလည်း… မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်မရောက်မချင်း အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအ‌ဝေးတွေမှာ မြန်မာကို အစိုးရအဆင့် ကိုယ်စားပြု တက်ခွင့်မပေးဖို့ အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ သူ့ရဲ့ တွစ်တာလူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ ဘုံသဘောတူညီချက် ငါးချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိုးတက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရကြောင်း ဒီနေ့ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ ထောက်ပြဆွေး‌နွေးခဲ့တယ်လို့လည်း ‌ရေးသားထားပါတယ်။
■ အာဆီယံအထူးသံတမနျ အာရီဝမျယူစှတျရဲ့ မွနျမာနိုငျငံခရီးစဉျတှေ အဆငျပွအေောငျ ဆောငျရှကျပေးဖို့၊ သကျဆိုငျရာ ပုဂ်ဂိုလျအားလုံးနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ တှဆေုံ့နိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးဖို့ ဗွိတနျ၊ ဩစတွေးလြ၊ ကနဒေါ၊ နယူးဇီလနျ၊ နျောဝေ၊ တောငျကိုရီးယား၊ တီမော၊ အမရေိကနျပွညျထောငျစုနဲ့ ဥရောပသမဂ်ဂတို့ ပူးတှဲပွီး မွနျမာစဈတပျကို တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
အာဆီယံအထူးသံရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ် အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အီးယူနဲ့ ၈ နိုင်ငံ ပူးတွဲတောင်းဆို
■ အာဆီယံအထူးသံတမန် အာရီဝမ်ယူစွတ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွေ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ဆုံနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဗြိတန်၊ ဩစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်၊ နော်ဝေ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တီမော၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတို့ ပူးတွဲပြီး မြန်မာစစ်တပ်ကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
လာမယ့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို တက်ခွင့်ပြု၊ မပြု ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၉ နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး‌တွေ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ဆွေးနွေးကြမယ့်အချိန် မတိုင်ခင်မှာပဲ အခုလို တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။
အာဆီယံအထူးသံတမန်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက် အခုလို တောင်းဆိုတာလို့ ဥရောပသမဂ္ဂ EU က ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကြောင့် ပြည်သူတွေကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်နေတဲ့အပြင်၊ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကိုပါ ထိခိုက်လာမယ့် အရေးကို အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း၊ အကျပ်အတည်းကို ငြိမ်းချမ်းပြီး အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်လာဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ အာဆီယံအထူးသံတမန်နဲ့ အပြုသဘော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အာဆီယံ သဘောတူညီချက် ၅ ရပ်ကို ပြီးပြည့်စုံအောင် အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြေညာချက်မှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့၊ သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဖို့၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေး၊ အကူအညီတွေ ပေးပို့ရာမှာ အတားအဆီးမရှိ လွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ အပါအဝင် မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသူတွေကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့…စတဲ့အချက်တွေကိုလည်း ကြေညာချက်မှာ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
လကျပံတောငျးတောငျဒသေ ဖောငျးကားကြေးရှာမှာ ဆန်ဒပွ
■ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ လကျပံတောငျးတောငျဒသေ ဖောငျးကားကြေးရှာက စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး သပိတျစဈကွောငျးဟာ ၂၀၂၁ အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျ ဒီနေ့ ဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ ဖောင်းကားကျေးရွာမှာ ဆန္ဒပြ
■ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ ဖောင်းကားကျေးရွာက စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်စစ်ကြောင်းဟာ ၂၀၂၁ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် ဒီနေ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂၀၂၁ အောကျတိုဘာလ ၁၅ ရကျ ညပိုငျး)
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂၁ အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျ ညပိုငျး)
- အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနဲ့ အာဆီယံ အထူးသံ မွနျမာ့အရေးဆှေးနှေး၊
- ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ရှနေ့တှေကေို မီဒီယာနဲ့မပွောဖို့ ကနျ့သတျတားမွဈမိနျ့ထုတျ၊
- NCA ၆ နှဈပွညျ့အခမျးအနား တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ ၈ ဖှဲ့တကျရောကျ၊
… စတာတှကေို ရှုစားနားဆငျရမှာပါ။
RFA နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက် (၂ဝ၂၁ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် ညပိုင်း)
- အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ အာဆီယံ အထူးသံ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး၊
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေကို မီဒီယာနဲ့မပြောဖို့ ကန့်သတ်တားမြစ်မိန့်ထုတ်၊
- NCA ၆ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ့တက်ရောက်၊
… စတာတွေကို ရှုစားနားဆင်ရမှာပါ။
■ အာဏာသိမျးစဈကောငျစီက ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားတဲ့ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ နိုငျငံတျော သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့တို့ရဲ့ အကြိုးဆောငျရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျဇျောကို အာဏာပိုငျတှကေ စကားပွောဆိုခှငျ့ မနကေ့ ပိတျပငျလိုကျပါတယျ။
မနကေ့စပွီး ပွညျတှငျး၊ ပွညျပသတငျးမီဒီယာ၊ နိုငျငံခွား သံတမနျ၊ နိုငျငံခွား အစိုးရ၊ ဘယျပွငျပအဖှဲ့အစညျး ပုဂ်ဂိုလျတှနေဲ့မှ တှဆေုံ့တာ၊ ပွောဆိုတာတှေ မလုပျဖို့ စဈကောငျစီရဲ့ ပဉျြးမနားမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးက ရာဇဝတျကငျြ့ထုံးဥပဒပေုဒျမ - ၁၄၄ ထုတျပွနျပွီး ပိတျပငျလိုကျတဲ့အကွောငျး ရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျဇျောက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျလူမှုကှနျရကျမှာ ဒီနမေ့နကျက အတညျပွုရေးသားထားပါတယျ။
အဲဒီအမိနျ့စာထဲမှာ ဦးခငျမောငျဇျောရဲ့ ဆကျသှယျပွောဆိုခကျြတှဟော တရားဥပဒနေဲ့အညီ ဆောငျရှကျရတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးဦးကို နှောငျ့ယှကျမှု ဒါမှမဟုတျ ထိခိုကျနာကငျြဆုံးရှုံးမှု၊ အမြားပွညျသူတှအေတှကျ ရုနျးရငျးဆနျခတျဖွဈမှုတှကေို ဖွဈစနေိုငျတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လုံခွုံရေးအရ အမညျမဖျောလိုတဲ့ အကြိုးဆောငျရှနေ့ေ တဈဦးကတော့ ရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျဇျောဟာ တရားခှငျထဲက အဖွဈအပကျြအတိုငျးသာ ပွောလရှေိ့ပွီး အခွားရညျရှယျခကျြနဲ့ ပုံကွီးခြဲ့ပွောခဲ့တာ မရှိဘူးလို့ ပွောပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့မှာနထေိုငျတဲ့ တရားလှတျတျော ရှနေ့ေ ဦးကွီးမွငျ့ကတော့ အခုလို စကားပွောခှငျ့ပိတျပငျတာဟာ ဥပဒနေဲ့မညီဘူးလို့ RFA ကို ပွောပါတယျ။
“အခုလို လုပျလို့ မရဘူး။ လုပျလို့ရတယျထားဦး ဥပဒနေဲ့ မညီဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဥပဒကေ အဲဒီလို လုပျခှငျ့ကို ပေးမထားဘူး။ ဘာတှကေ ပေးမထားဘူးလဲဆိုတော့ ပွဈမှုဆိုငျရာကငျြ့ထုံးဥပဒနေဲ့ သတငျးမီဒီယာ ဥပဒတှေကေ အဲလိုလုပျခှငျ့ မပေးဘူး။ အဲဒီတော့ သူက ၁၄၄ ထုတျတာဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၁၀၀ ကြျောက ဥပဒကေို ကိုးကားပွီး ထုတျတာ။ သတငျးမီဒီယာ ဥပဒဆေိုတာက မနတေ့နတေု့နျးကမှ ဦးသိနျးစိနျ လကျထကျမှ စထုတျတာ။ အဲဒီတော့ ရှေးကတြဲ့ ဥပဒနေဲ့ နောကျကတြဲ့ ဥပဒတေို့ ပွိုငျလာရငျ နောကျကတြဲ့ ဥပဒကေပဲ လှမျးမိုးတယျ။ ၁၉၇၃ ခုနှဈ၊ စကားရပျမြား ဖှငျ့ဆိုတဲ့ ဥပဒအေရ အဲဒီ ၁၄၄ ကို သတငျးမီဒီယာ ဥပဒကေ လှမျးမိုးတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို့ ဒီလိုထုတျလို့ မရဘူး”
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့တို့ရဲ့ သွဇာကွီးမားမှုကို စဈကောငျစီက ကွောကျလနျ့နလေို့ အခုလို ကနျ့သတျတာလို့ ယူဆကွောငျးလညျး ရှနေ့ေ ဦးကွီးမွငျ့က ပွောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလ ၁၂ ရကျနကေ့ ရုံးထုတျစဉျ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့က စဈတပျကအာဏာသိမျးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနမှေ့ာ စဈတပျအရာရှိတှကေ သမ်မတရာထူးကနေ ဖိအားပေးနုတျထှကျခိုငျးခဲ့ကွောငျး၊ စဈတပျက အတငျးအဓမ်မအာဏာသိမျးခဲ့တာဖွဈကွောငျး တရားခှငျထဲမှာ ထှကျဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒီထှကျဆိုခကျြတှဟော အမြားပွညျသူ သိသငျ့သိထိုကျတဲ့ အခကျြတှဖွေဈလို့ သတငျးမီဒီယာတှကေို ပွနျပွောပွဖို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျ ရှနေ့တှေကေို ညှနျကွားခဲ့တယျလို့ ရှနေ့အေသိုငျးအဝိုငျးက ပွောပါတယျ။
အဲဒီထှကျဆိုခကျြကို နိုငျငံတကာသတငျးမီဒီယာတှကေ အကယျြတဝငျ့ဖျောပွခဲ့ပွီးနောကျ အကြိုးဆောငျ ရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျဇျောကို စဈကောငျစီက အခုလို နှုတျပိတျလိုကျတာလို့လညျး ရှနေ့အေသိုငျးအဝိုငျးက ပွောပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ အကြိုးဆောငျရှနေ့အေဖှဲ့ထဲက ရနျကုနျမွို့မှာနထေိုငျတဲ့ ရှနေ့ေ ဒျေါစနျးမာလာညှနျ့ ကိုလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလက စဈကောငျစီရဲ့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးက သတငျးမီဒီယာတှကေို မပွောဖို့ ဝနျခံကတိ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့တဲ့အတှကျ အခုဆိုရငျ စကားပွောခှငျ့ ပိတျပငျခံရတာ နှဈဦးရှိလာတာလို့ လုံခွုံရေးအရ အမညျမဖျောလိုတဲ့ အကြိုးဆောငျရှနေ့တေဈဦးက ပွောပါတယျ။
နောကျထပျ အကြိုးဆောငျရှနေ့တေဈဦးဖွဈတဲ့ ဒျေါမငျးမငျးစိုးကလညျး ယခငျက သတငျးမီဒီယာတှကေို ပုံမှနျဖွကွေားပေးခဲ့ရာကနေ ပွီးခဲ့တဲ့ သီတငျးနှဈပတျလောကျကစပွီး လုံးဝမဖွကွေားတော့ပါဘူး။
စဈကောငျစီ ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာန ဒုဝနျကွီး ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးကတော့ တိုငျးပွညျကို အရေးပျေါအခွေ အနကွေညောပွီး တပျမတျောက တာဝနျရယူနခြေိနျမှာ ဦးခငျမောငျဇျောရဲ့ ပွောစကားတှဟော တိုငျးပွညျတညျငွိမျရေးကို ပကျြပွားစနေိုငျတယျလို့ သုံးသပျတဲ့အတှကျ အခုလို ကနျ့သတျလိုကျတာလို့ တုံ့ပွနျပါတယျ။
“ဒီလို အခြိနျမြိုးမှာ ပွောခွငျးအားဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ အခွအေနလေညျး သိပွီးသားပဲ။ ဒါတှကေ တညျငွိမျအေးခမျြးရေး ပွညျသူလူထုရဲ့ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးကို အထောကျအကူ ပွုစလေား၊ အထောကျအကူ မပွုစလေားဆိုတာ ဆငျခွငျတုံတရားနဲ့ သုံးသပျလို့ရတယျ။ အထောကျအကူ မပွုစပေါဘူး။ ပိုပွီးတော့မှ တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျကွား သှေးကှဲမှု ထငျယောငျထငျမှားဖွဈမှုတှေ ပိုပွီးတော့ ဖွဈပျေါလာနိုငျတဲ့အတှကျ ကနျ့သတျရခွငျး ဖွဈပါတယျ”
နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့ စဈဆေးခံနရေတဲ့ နပွေညျတျော ကောငျစီရုံးဝငျးထဲက ရုံးအမှတျ (၁) တရားခှငျဟာ ပှငျ့လငျးတဲ့တရားခှငျဖွဈတယျလို့ အမှုကိုစဈနတေဲ့ တရားသူကွီးကိုယျတိုငျ ပွောဆိုထားတဲ့ တရားခှငျတဈခု ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလအတှငျးက တရားရုံးခြိနျးတဈခုမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက တရားခှငျထဲမှာ တရားရုံးရဲ့ ထှကျဆိုခကျြတှကေို အပွငျမှာ ပွနျလညျပွောဆိုခှငျ့ ရှိ၊ မရှိ တရားသူကွီးကို မေးမွနျးခဲ့ရာမှာ တရားသူကွီးက ပှငျ့လငျးတဲ့တရားရုံးဖွဈလို့ ပွောဆိုခှငျ့ရှိကွောငျး ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့တယျလို့ ရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျဇျောက သတငျးမီဒီယာတှကေို ပွောဆိုထားပါတယျ။
အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ ဗဟိုကျောမတီဝငျတဈဦးဖွဈသူ ဦးကြျောသီဟကတော့ ဒါဟာ အာဏာသိမျး စဈကောငျစီအနနေဲ့ သတငျးတှအေမှောငျခပြွီး အုပျခြုပျဖို့ကွိုးစားနတောလို့ RFA ကို ပွောပါတယျ။
“ပွညျသူ့ခေါငျးဆောငျတှေ တရားရုံးမှာ ပွောတဲ့စကားကိုတောငျ ဥပဒသေမား ရှနေ့တှေေ ပွောခှငျ့အပိတျခံရတယျ။ ဒါဘာသဘောလဲဆိုတော့ ကနြျောတို့ကို စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံ အသီးသီးကို တရားဝငျ ကွညောတဲ့သဘော။ ငါတို့ အစိုးရကတော့ သတငျးအမှောငျခပြွီ။ မတရား ဥပဒနေဲ့ ကိုယျ့တိုငျးပွညျ ပွညျတှငျးရေးကို ဆကျအုပျခြုပျတော့မှာပဲဆိုတဲ့ ရဲရဲတငျးတငျး ကွညောတဲ့ သဘော”
စဈတပျက အာဏာသိမျးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနကေ့တညျးက အဖမျးခံခဲ့ရတဲ့ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့နဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့ဟာ ပွညျသူလူထုနဲ့ အခြိနျတဈလခနျ့ လုံးဝအဆကျအသှယျပွတျသှားခဲ့ပွီး တရားရုံးတငျစဈဆေးခဲ့တဲ့ မတျလဆနျးပိုငျးရောကျမှသာ သူတို့ရဲ့ ကနျြးမာရေး အပါအဝငျ အမှုအခွအေနတှေကေို ပွညျသူလူထုက ရှနေ့တှေကေတဆငျ့ သိခှငျ့ရခဲ့တာပါ။
အမှုပေါငျး ၁၁ မှုနဲ့ အရေးယူခံထားရတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ ရုံးခြိနျးတှကေို အပတျစဉျ တကျရောကျနရေပွီး ကနျြးမာရေးအရ နှဈပတျတဈခါမှ ရုံးခြိနျးတကျရောကျခှငျ့ပွုဖို့ လြှောကျထားခကျြကိုလညျး စဈကောငျစီဘကျက ပယျခထြားပါတယျ။
နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့တို့ကို အဂတိမှုတှနေဲ့ နပွေညျတျောမှာ ဒီနေ့ ရုံးထုတျခဲ့ပမေယျ့ ရှနေ့တှေကေ မဖွကွေားတော့တာကွောငျ့ ဒီနအေ့တှကျ အမှုအခွအေနကေို မသိရသေးပါဘူး။
အာဏာသိမျး စဈကောငျစီက အကြိုးဆောငျရှနေ့တှေရေဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့တှကေိုပါ ကနျ့သတျလာတဲ့အတှကျ နောကျပိုငျးမှာ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့နဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့ရဲ့ အခွအေနတှေကေို အမြားပွညျသူသိခှငျ့ ရနိုငျဖို့ ပိုခကျခဲလာနိုငျတယျလို့လညျး ပွောဆိုနကွေပါတယျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ကို စကားပြောခွင့် စစ်ကောင်စီပိတ်ပင်
■ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ကို အာဏာပိုင်တွေက စကားပြောဆိုခွင့် မနေ့က ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
မနေ့ကစပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသတင်းမီဒီယာ၊ နိုင်ငံခြား သံတမန်၊ နိုင်ငံခြား အစိုးရ၊ ဘယ်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မှ တွေ့ဆုံတာ၊ ပြောဆိုတာတွေ မလုပ်ဖို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ - ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီး ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အကြောင်း ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက်မှာ ဒီနေ့မနက်က အတည်ပြုရေးသားထားပါတယ်။
အဲဒီအမိန့်စာထဲမှာ ဦးခင်မောင်ဇော်ရဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုချက်တွေဟာ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို နှောင့်ယှက်မှု ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်နာကျင်ဆုံးရှုံးမှု၊ အများပြည်သူတွေအတွက် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ တစ်ဦးကတော့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ဟာ တရားခွင်ထဲက အဖြစ်အပျက်အတိုင်းသာ ပြောလေ့ရှိပြီး အခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပုံကြီးချဲ့ပြောခဲ့တာ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်ကတော့ အခုလို စကားပြောခွင့်ပိတ်ပင်တာဟာ ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
“အခုလို လုပ်လို့ မရဘူး။ လုပ်လို့ရတယ်ထားဦး ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဥပဒေက အဲဒီလို လုပ်ခွင့်ကို ပေးမထားဘူး။ ဘာတွေက ပေးမထားဘူးလဲဆိုတော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေနဲ့ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေတွေက အဲလိုလုပ်ခွင့် မပေးဘူး။ အဲဒီတော့ သူက ၁၄၄ ထုတ်တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က ဥပဒေကို ကိုးကားပြီး ထုတ်တာ။ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေဆိုတာက မနေ့တနေ့တုန်းကမှ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှ စထုတ်တာ။ အဲဒီတော့ ရှေးကျတဲ့ ဥပဒေနဲ့ နောက်ကျတဲ့ ဥပဒေတို့ ပြိုင်လာရင် နောက်ကျတဲ့ ဥပဒေကပဲ လွှမ်းမိုးတယ်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ စကားရပ်များ ဖွင့်ဆိုတဲ့ ဥပဒေအရ အဲဒီ ၁၄၄ ကို သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေက လွှမ်းမိုးတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဒီလိုထုတ်လို့ မရဘူး”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့ သြဇာကြီးမားမှုကို စစ်ကောင်စီက ကြောက်လန့်နေလို့ အခုလို ကန့်သတ်တာလို့ ယူဆကြောင်းလည်း ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ရုံးထုတ်စဉ် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်အရာရှိတွေက သမ္မတရာထူးကနေ ဖိအားပေးနုတ်ထွက်ခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ စစ်တပ်က အတင်းအဓမ္မအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း တရားခွင်ထဲမှာ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာ အများပြည်သူ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြန်ပြောပြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရှေ့နေတွေကို ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေအသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
အဲဒီထွက်ဆိုချက်ကို နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေက အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ကို စစ်ကောင်စီက အခုလို နှုတ်ပိတ်လိုက်တာလို့လည်း ရှေ့နေအသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေအဖွဲ့ထဲက ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ရှေ့နေ ဒေါ်စန်းမာလာညွန့် ကိုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက စစ်ကောင်စီရဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတင်းမီဒီယာတွေကို မပြောဖို့ ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် စကားပြောခွင့် ပိတ်ပင်ခံရတာ နှစ်ဦးရှိလာတာလို့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
နောက်ထပ် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးကလည်း ယခင်က သတင်းမီဒီယာတွေကို ပုံမှန်ဖြေကြားပေးခဲ့ရာကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းနှစ်ပတ်လောက်ကစပြီး လုံးဝမဖြေကြားတော့ပါဘူး။
စစ်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကတော့ တိုင်းပြည်ကို အရေးပေါ်အခြေ အနေကြေညာပြီး တပ်မတော်က တာဝန်ရယူနေချိန်မှာ ဦးခင်မောင်ဇော်ရဲ့ ပြောစကားတွေဟာ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးကို ပျက်ပြားစေနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်တဲ့အတွက် အခုလို ကန့်သတ်လိုက်တာလို့ တုံ့ပြန်ပါတယ်။
“ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ ပြောခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေလည်း သိပြီးသားပဲ။ ဒါတွေက တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ပြည်သူလူထုရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အထောက်အကူ ပြုစေလား၊ အထောက်အကူ မပြုစေလားဆိုတာ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ သုံးသပ်လို့ရတယ်။ အထောက်အကူ မပြုစေပါဘူး။ ပိုပြီးတော့မှ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ကြား သွေးကွဲမှု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှုတွေ ပိုပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ကန့်သတ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ နေပြည်တော် ကောင်စီရုံးဝင်းထဲက ရုံးအမှတ် (၁) တရားခွင်ဟာ ပွင့်လင်းတဲ့တရားခွင်ဖြစ်တယ်လို့ အမှုကိုစစ်နေတဲ့ တရားသူကြီးကိုယ်တိုင် ပြောဆိုထားတဲ့ တရားခွင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအတွင်းက တရားရုံးချိန်းတစ်ခုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားခွင်ထဲမှာ တရားရုံးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို အပြင်မှာ ပြန်လည်ပြောဆိုခွင့် ရှိ၊ မရှိ တရားသူကြီးကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ တရားသူကြီးက ပွင့်လင်းတဲ့တရားရုံးဖြစ်လို့ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောဆိုထားပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်သီဟကတော့ ဒါဟာ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ သတင်းတွေအမှောင်ချပြီး အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်တွေ တရားရုံးမှာ ပြောတဲ့စကားကိုတောင် ဥပဒေသမား ရှေ့နေတွေ ပြောခွင့်အပိတ်ခံရတယ်။ ဒါဘာသဘောလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးကို တရားဝင် ကြေညာတဲ့သဘော။ ငါတို့ အစိုးရကတော့ သတင်းအမှောင်ချပြီ။ မတရား ဥပဒေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ပြည်တွင်းရေးကို ဆက်အုပ်ချုပ်တော့မှာပဲဆိုတဲ့ ရဲရဲတင်းတင်း ကြေညာတဲ့ သဘော”
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ အချိန်တစ်လခန့် လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီး တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ မတ်လဆန်းပိုင်းရောက်မှသာ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အပါအဝင် အမှုအခြေအနေတွေကို ပြည်သူလူထုက ရှေ့နေတွေကတဆင့် သိခွင့်ရခဲ့တာပါ။
အမှုပေါင်း ၁၁ မှုနဲ့ အရေးယူခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရုံးချိန်းတွေကို အပတ်စဉ် တက်ရောက်နေရပြီး ကျန်းမာရေးအရ နှစ်ပတ်တစ်ခါမှ ရုံးချိန်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့ လျှောက်ထားချက်ကိုလည်း စစ်ကောင်စီဘက်က ပယ်ချထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ကို အဂတိမှုတွေနဲ့ နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ ရုံးထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ရှေ့နေတွေက မဖြေကြားတော့တာကြောင့် ဒီနေ့အတွက် အမှုအခြေအနေကို မသိရသေးပါဘူး။
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်တွေကိုပါ ကန့်သတ်လာတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ အခြေအနေတွေကို အများပြည်သူသိခွင့် ရနိုင်ဖို့ ပိုခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
RFA Burmese broadcasts two hours of original programming each day. Schedule and frequency information can be found at:
Radio programs are available 24 hoursaday on our website.
Be the first to know and let us send you an email when RFA Burmese posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to RFA Burmese:
ပွညျတှငျးအကပျြအတညျးကို ဆှေးနှေးရေးနညျးလမျးနဲ့အဖွရှောဖို့ အပဈရပျအဖှဲ့တှတေိုကျတှနျး
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂၁ အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျ မနကျပိုငျး)
မငျးတပျမှာ စဈကောငျစီ အငျအားတိုးခလြာတဲ့နရောတှေ ရှောငျရှားဖို့ ဒသေPDF တိုကျတှနျး
အာဏာသိမျးကတညျးက ဖမျးဆီးခံရသူသံဃာတှထေဲမှာ စာရငျးအတိအကသြိရသူ ၃၆ ပါးရှိပွီ
စဈတပျက တငျးမရှာသား ၁၈ ဦးကို နှဈနှဈကွာတဲ့အထိ မိသားစုထံ ပွနျမပို့သေး
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂၀၂၁ အောကျတိုဘာလ ၁၄ ရကျ ညပိုငျး)
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂၁ အောကျတိုဘာ ၁၄ ရကျ မနကျပိုငျး)
အာဆီယံကိုယျစားလှယျ မွနျမာနိုငျငံလာရေး ဈေးဆဈနလေို့ ကွနျ့ကွာနတောလို့ စဈကောငျစီပွော
နိုငျငံတဈဝနျး တာဝနျကနနေုတျထှကျတဲ့ ရပျကြေးအုပျရေးမှူး ၃၆၀ ကြျော ရှိလာ
ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး CNF ဌာနခြုပျကိုခမြှေုနျးဖို့ စဈကောငျစီပွငျဆငျနေ
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂၀၂၁ အောကျတိုဘာလ ၁၃ ရကျ ညပိုငျး)
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂၁ အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျ မနကျပိုငျး)
တျောလှနျရေးအငျအားစုတှကေ တိုငျးပွညျဖကျြဆီးနဟေု တပျတှငျးဝါဒဖွနျ့ခြိနေ
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂၁ အောကျတိုဘာ ၁၂ ရကျ ညပိုငျး)
စဈကိုငျးတိုငျးမှာ ဗြူဟာမှူးနဲ့ ၃၀ ကြျော သဆေုံးကွောငျး PDF ပွောဆိုခကျြ စဈကောငျစီငွငျးဆို
စဈကောငျစီကိုတျောလှနျဖို့ နိုငျငံခွားသင်ျဘောသားဘဝကို စှနျ့လှတျခဲ့တဲ့ ကရငျနီလူငယျ
ခငျြးပွညျနယျမှာ စဈကောငျစီတပျ အငျအားအလုံးအရငျး ဖွညျ့တငျးနေ
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂၁ အောကျတိုဘာ ၁၂ ရကျ မနကျပိုငျး)
NUG အစိုးရရဲ့ ခကျြနိုငျငံဆိုငျရာကိုယျစားလှယျနဲ့ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြ